भारतीय खेलाडीसँग फाइनलमा हारे प्रिन्स | सबै खेल
भारतीय खेलाडीसँग फाइनलमा हारे प्रिन्स
२७ पुष २०७६, आईतवार ०२:१६
उपाधिको आशा गरिएका नेपाली खेलाडी प्रिन्स दाहाल प्रेसिडेन्ट कप नेपाल इन्टरनेसनल सिरिज २०२० को पुरुष एकलतर्फ उपविजेतामै रोकिएका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्ड हलमा शनिबार सम्पन्न फाइनलमा प्रिन्स भारतीय प्रतिद्वन्द्वीसँग मिरवा लुवाङगसँग सीधा ३–० को सेटमा पराजित भएपछि उपाधिबाट चुकेका हुन् ।
प्रिन्स उपाधि भिडन्तमा २१–१६, २१–२३ र २१–१५ को सेटमा पराजित भएका हुन् । दुबई इन्टरनेसनल सिरिजका विजेता प्रिन्सले भारतीय प्रतिद्वन्द्वीसामु एक सेट मात्रै आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए । बाँकी दुई सेटमा उनले भारतीय खेलाडीलाई धेरै टक्कर दिन सकेनन् । विश्व वरीयतामा मिरबा प्रिन्सभन्दा ११ स्थानअघि रहेका खेलाडी हुन् ।
मिरबा जुनियरतर्फ विश्ववरीयताको तेस्रो र प्रिन्स १४औँ स्थानमा छन् । यससँगै प्रतियोगिताको पाँचमध्ये पाँचै विधाको उपाधि भारतीय खेलाडीले जितेका छन् । महिला एकलतर्फको उपाधि पनि भारतकी तस्निम मिरले जितिन् । मिरले फाइनलमा मलेसियाकी करुपथेभन लेत्सानालाई २१–१७ र २१–१४ ले पराजित गरिन् ।
यस्तै, पुरुष युगलतर्फ भारतीय खेलाडीद्वय आर. विकास प्रभु र अरुण कार्तिक के को जोडीले उपाधि जित्यो । यो विधाको उपाधिका लागि विकास र अरुणको जोडीले नेपालमा प्रिन्स दाहाल र पेम्बा शेर्पाको जोडीलाई १९–२१, २१–१४, २१–१६ को सेटमा पराजित ग¥यो । महिला युगलतर्फको उपाधिका लागि भारतीय खेलाडी ननधा के. र सानिया सिकन्दरको जोडीले नेपालका विष्णा विष्ट र प्रश्ना खत्रीको जोडीलाई नै २१–६ र २१–६ को सहज सेटमा पराजित ग¥यो ।
मिक्स युगलतर्फको उपाधि भारतका मुरुगप्पा केएस र सानिया सिकन्दरको जोडीले जित्यो । यो जोडीले उपाधिका लागि फाइनलमा आफ्नै देशका आयन रसिद र तस्मिन मिरको जोडीलाई २१–१७ र २१–१४ ले पराजित ग¥यो ।